Search Term: စီးပွားရေးဆိုင်ရာ , 14,136 results have been searched, Search time: 0.074 seconds , Sorting Option: Match level Published Date Subject Title Author Call No. Borrowed Times Renewal Times Volume No. Sort by: Desc Asc Hide Navigation | Hide trend diagram
စီးပွားရေးစိတ်ပညာ စီးပွားရေးဘုရင် စီးပွားရေး- သမိုင်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာစုများ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအယူအဆ ၁၀၀ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာပညာ စီးပွားရေးပညာ စီးပွားရေးမျက်စိ
NL Yangon (9668)
မျိုးမာန်၊ ပန်းချီ (82)
လှကြွယ်၊ ဦး (68)
သုခ၊ ကို (64)
ပန်းချီမျိုးမာန်၊ ဇာတ်ညွှန်းကိုသုခ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်သူဦးလှကြွယ် (31)
သုခ၊ ကို ဇာတ်ညွှန်း (31)
Total 1,414 pages First Page <Prev 1234567 8910 Next > Last Page>>
Author: ရဲမာန်၊ စီစဉ်သူ
Publisher: ရွှေမောင်းဓမ္မရသသုတရုပ်စုံ Published Date: 2018
Literature Type: Books , Call No.: ၇၄၁.၆ ရွှေ ၂၀၁၈/ ၃၃၂
Publisher: နေရီရီစာပေ Published Date: 2010
Literature Type: Books , Call No.: ၈၉၅.၈၄ ရ ၂၀၁၀/၃၉၁၄
Author: မဲတူ၊မောင် (စီမံကိန်း)
Publisher: ခရီးဖော်စာပေ Published Date: 2017
Literature Type: Books , Call No.: ၃၃၀ မဲ ၂၀၁၇/၂၅၀၈
Author: တာရာ၊ ဒဂုန် -
Literature Type: Books , Call No.: 895.84 တာ ၂၀၁၉/၁၂၇၃
Literature Type: Books , Call No.: ၆၅၈ မာ ၂၀၁၁/၂၁၇၃
Publisher: ရှင်ထွေးစာပေ Published Date: 1985
Literature Type: Books , Call No.: ၈၉၅.၈၄ အောင် ၂၀၁၇/၂၀၂၆
Publisher: ယနေ့မန္တလေးစာပေ Published Date: 2006
Literature Type: Books , Call No.: 300 ကြည် ၂၀၀၆/၃၇၅၅
Publisher: စာလက်ဆောင်စာပေ Published Date: 1963
Literature Type: Books , Call No.: ၃၀၀ ရ ၂၀၁၀/၂၉၈၅